NgokoMthetho kunye neengcaciso - Trading - Libertex
ekhaya»NgokoMthetho kunye neengcaciso - Trading
Eyona Price is a Quote apho iNkampani ukulungele ukuqhuba Trading Operation kwindawo Point elithile.
Buza Price lixabiso zabaXhasi apho ukwazi ukuqhuba Operation Trading ukuthenga Instrument, for Iindawo Trading ezivumela ekuqhubeni yoRhwebo Imisebenzi kunye Gcobisa.
Person abagunyazisiweyo na umntu okanye ezomthetho ogunyaziswe ngokusemthethweni ukulawula okanye ukuqhuba izenzo ezithile.
iimali ezikhoyo na isixa semali eboniswe kwicandelo akhawunti iBhonasi of Personal Akhawunti Management Portal ukuba ukudluliselwa ukusuka Bonus Akhawunti ukuya Akhawunti Ukurhweba ze isetyenziswe ngokungqinelana nemigaqo emiselwe Trading Akhawunti.
ibhalansi sisixa semali kwi Akhawunti yoRhwebo zabaXhasi ngayo ngaphandle Isikhundla Vula kungaphumela; Ubulungisa ye-Akhawunti yoRhwebo nisingasinga impumelelo zonke Isikhundla ezivaliweyo kunye Imisebenzi Non-Ukurhweba.
lwemali Base na imali ye lwemali Pair leyo kuthengwa okanye makuthengiswe ngalo ngenxa Currency lwesilinganiso (counter lwemali). Kungenxa kwinani kwi lwemali Iperi (lwemali sokuqala kwisibini).
bid Price lixabiso apho Client ungenza itransekshini ezithengisela (ukuthengisa Instrument), ngokuba Terminals Trading siyakuvumela ekuqhubeni Imisebenzi Trading ne Gcobisa.
Day Business lixesha span evela 06:00 ukuba 15:00 GMT yonke imihla, ngaphandle veki nangeeholide. Ulwazi lwamva malunga veki nangeeholide ishicilelwe kwi Website yeNkampani. Oku kungenziwa isaqhubeka ukuba 1 ngehora phakathi ihlobo nobusika ixesha shift.
CFD Instrument sisixhobo apho Trading Operation esiqhutywa kwaye esekelwe kwi ethile Asset olufunyenweyo. Baluncedo olufunyenweyo kungahlanganisa izabelo, yezimbiwa, indices, bazisebenzise kwakunye nezinye izinto, izinto kunye neemeko ngokuvumelana noluhlu evunyiweyo yiNkampani. Ulwazi malunga nenani CFD Instruments ishicilelwe kwi Website yenkampani wazifaka kwiiseva yalo yorhwebo. ulwazi lomncedisi Trading uza koyisa xa kukho nakuphi na ukungangqinelani.
Ibhalansi Cima kwemali - ekhoyo mali zokurhoxa engasebenzisi zabaXhasi kumsebenzi Trading. Imali eyi-Clear Ibhalansi-mali ibalwa yiNkampani ngokungqinelana nemigaqo emiselwe yi yiNkampani. Ulwazi malunga kwisixa Clear Ibhalansi of mali unako icaciswe Personal Akhawunti Management Portal no okanye Trading Terminal.
client ngumntu wendalo okanye ezomthetho ongenela sivumelwano iNkampani kwaye uqhuba Trading iMisebenzi kwi-sikhokelo yeSivumelwano kunye neencwadana zawo.
Akhawunti zabathengi i-akhawunti ekhethekileyo Akhawunti Personal Management Portal wavula yiNkampani ukugcina imali zabaXhasi yaye liqhuba Operations Trading.
Indawo ezivaliweyo sisiphumo yokwenza kwinxalenye yesibini ye uhambo Round (Trading Nokusebenza lokuvala isikhundla).
Akhawunti nkampani i-akhawunti lwangoku kweNkampani kwiziko zemali, i akhawunti (wallet) kwinkqubo yentlawulo ngekhompyutha kwakunye nezinye iingxelo kubandakanywa iingxelo Agents Ukuhlawula.
counter lwemali (Caphula lwemali) i lwemali esetyenziselwa ukuthenga nokuthengisa Base Currency. Xa lwemali lwemali Pair Counter limelwe zifana (lowo yesibini a lwemali Iperi).
lwemali Matanisa (forex) i currency ezimbini (Base Currency and Counter Currency) apho inxaxheba inxaxheba Trading Operation ngeempahla lwemali. Ulwazi malunga nenani wePurble Currency omelwa Website yenkampani wazifaka kwiiseva yalo yorhwebo. ulwazi lomncedisi Trading uza koyisa xa kukho nakuphi na ukungangqinelani.
Dealer Ingaba umsebenzi Inkampani ogunyaziselwe karhulumente Quotes, iliso ukuchana Trading Imisebenzi ye Abathengi, emphinini ikhalazela aze achaze iimeko zoshishino ezinxulumene ekuqhubeni Trading Nemisebenzi akhawunti ye Clients '.
Equity na ingqikelelo olulinganiswa yeendleko imali kwi Akhawunti Trading esenza isixa-mali kwi-Akhawunti yoRhwebo kuquka inzuzo kungaqatshelwanga (ukulahlekelwa).
zokuphelelwa i zokuphelelwa of CFD Instrument, Ukuyeka ukuqhutywa yoRhwebo Imisebenzi kunye Asset yangoku olufunyenweyo nokuqala Imisebenzi Trading oqhuba kunye nalowo elilandelayo. Imihla ukuphelelwa Instrument nganye CFD ezibunjwe yiNkampani unilaterally kwaye echazwe kwi Website yenkampani wazifaka kwiiseva yalo yorhwebo. ulwazi lomncedisi Trading uza koyisa xa kukho nakuphi na ukungangqinelani.
Akhawunti Client lwangaphandle ngayo i-akhawunti yangoku kwiziko zemali, i akhawunti (wallet) kwinkqubo yentlawulo ngekhompyutha.
Enze Intengo eme (Phezu isicelo) uhlobo lwe Trading Imisebenzi ukubulawa zabaXhasi xa inikwa okokuqala kunye uphindo ngqo lokuqhuba Ukurhweba Operation waza yena okanye uyaqinisekisa umnqweno zakhe kuqhuba Trading Operation ngokunqakraza kwi inani Trading Terminal. Emva ngokucofa ngexabiso le Trading Operation kusenokuqhutywa kuqinisekiswa kwiseva yeNkampani okanye umxhamli wacela ukuba bacele uphindo lokuqhuba Trading Operation kwakhona.
Funds Ukurhoxiswa na ukurhoxiswa imali Akhawunti yoRhwebo zabaXhasi yaye ukudlulisela kwabo iinkcukacha zebhanki yakhe okanye ukuba iinkcukacha zebhanki umntu ogunyazisiweyo ukuba Client ibonise kwakhe okanye isicelo sakhe yokuyeka.
gap utshintsho lwe ngexabiso xa Quote ilandelayo wahlukile kowangaphambili ngu ezininzi (amashumi) of iipete.
bengafuni (Vala) lelwe Izithuba ezibini Open ukuba Instrument efanayo apho enye indawo inde kwaye enye mfutshane.
imajini lokuqala (Iimfuno imajini) na izibambiso efunekayo ukuvula isikhundla. Iimfuno esima ukuze Instrument nganye iya kuchaziwe kwi Website yenkampani wazifaka kwiiseva yalo yorhwebo. ulwazi lomncedisi Trading uza koyisa xa kukho nakuphi na ukungangqinelani.
enze Instant uhlobo lwe Trading Imisebenzi ukubulawa xa Client unqwenela ukuqhuba Trading Operation ngokunqakraza kwi inani Trading Terminal. Ukuba ixabiso nangoku ngqo a Operation Trading kuqinisekiswa. Ukuba Caphula kwi Trading Terminal akukho kanye na ngakumbi zabaXhasi inikezwa ixabiso elitsha Trading Operation uphumezo. Kunikezo ukuqhuba Trading Operation ngexabiso entsha sisebenza ngexesha ixesha Limited. IiNkonzo zabaXhasi bathe bavumelana ukuba kunokwenzeka Trading Operation bayagwetywa na Ixabiso Eyona kumncedisi yenkampani kufuneka iinzame zabaXhasi ukuba aqhube Trading Operation ngokuphindaphindiweyo (kungekho ngaphantsi kwe 2 (Mbini) imizamo emgceni) yaliwe iseva yenkampani ngenxa yokuba kutshintshwe Price Eyona kumncedisi.
instrument Financial i Spot Instrument kunye (okanye) CFD Instrument. Ulwazi malunga nenani Instruments omelwa Website yenkampani wazifaka kwiiseva yalo yorhwebo. ulwazi lomncedisi Trading uza koyisa xa kukho nakuphi na ukungangqinelani.
eqhinga lulwahlulo phakathi umthamo a Trading Operation kunye nomthamo eludinini lokuqala.
Nciphisa (Thatha nzuzo) na uhlobo leyo eyabelwe kuMyalelo kwimeko an Order eso kulindeleke ukuba sithengise ngexabiso (izinga) ingaphezulu umyinge kwimarike yangoku okanye ukuthenga kwi ngexabiso (izinga) leyo lingaphantsi izinga market yangoku. Eyona njongo ephambili yolu Limit Orders kukuba ngqiniseko Trading Operation bayagwetywa ngexabiso ingabi mbi kunalowo okhankanywe Order.
Ifayile ye log kuba yinxalenye Trading Terminal kunye (okanye) i Akhawunti Personal Management Portal obekelwe ukulungisa (ukurekhoda) idatha adluliselwe yi Amaqela sithumelelane iisms ebudeni inzaliseko kwesiVumelwano ngokusebenzisa Trading Terminal kunye (okanye) i Akhawunti Personal Management Portal. Wonke ukufikelela kwesiVumelwano Party ukuya Trading Terminal okanye Akhawunti Personal Management Portal iya ezisisigxina File Log kwaye kuphindwa kwi server yeNkampani. Kweeseva ezibaluliweyo ke mthombo ulwazi ongundoqo yaye yamkelwa Companies njengoko ubungqina kwimeko ukuhlola iimeko disputable onxulumene ukuzaliseka kwesi siVumelwano. Ingcaciso evela Ifayile Ilog womncedisi yeNkampani liya kuqala mda ezinye iingxoxo xa kuqwalaselwa imeko disputable kuquka ngokunxulumene ingcaciso evela Ifayile Ilog ye-Client kaThixo Trading Terminal kunye (okanye) i Akhawunti Personal Management Portal. Le nkampani iCandelo leeMviwo linelungelo ukulungisa ubunyani ukufikelela kwesiVumelwano Party ukuya Trading Terminal okanye Management Akhawunti Personal Portal kule Log File.
Indawo Long ukuthenga i Instrument kunye kulindeleke ukuba ixabiso layo (inani) uya kuvuka.
uLote umthamo standard of an Instrument ngokunxulumene apho Operation Trading lwenziwa. Omnye Trading Umsebenzi kuqhutywa amaqashiso eziliqela okanye amalungu abo. Kubukhulu amaqashiso Instrument ngamnye kunye nohlobo Ukurhweba Terminal iya kuchaziwe kwi Website yenkampani wazifaka kwiiseva yalo yorhwebo. ulwazi lomncedisi Trading uza koyisa xa kukho nakuphi na ukungangqinelani.
imajini Level (Equity Level) lulwahlulo phakathi Equity and imajini yeBhunga, kuboniswa njengepesenti.
imajini ezifunekayo (Funds agciniwe, imajini) na isixa egcweleyo Akhawunti yoRhwebo a Client bakaThixo ukugcina yonke yakhe (naye) Isikhundla Vula. Imajini Iimfuno eziyimfuneko Vula Isikhundla ukuba Instrument ngalinye axeliwe kwi Website yenkampani wazifaka kwiiseva yalo yorhwebo. ulwazi lomncedisi Trading uza koyisa xa kukho nakuphi na ukungangqinelani.
enze Market (Eyona Price) uhlobo lwe Trading Imisebenzi ukubulawa xa Client unqwenela ukuqhuba Operation Trading kokuba kuvunyelwene ngaphambili ukuba Trading Umsebenzi uya kubulawa ngexabiso apho eyona kumncedisi yeNkampani (ngaphandle ngumnikelo Quotes ezintsha).
Mid Price lixabiso phakathi Bid kwaye Buza Amaxabiso a Client apho ukwazi ukuqhuba Trading Operation e Terminals Trading siyakuvumela baqhuba Imisebenzi Trading ngaphandle Gcobisa.
wokuphindaphinda lulwahlulo phakathi yorhwebo mali ipesenti utshintsho Libertex terminal nexabiso Asset olufunyenweyo, Currency Base ipesenti ixabiso utshintsho. Ingcaciso yakutshanje malunga ubukhulu ubuninzi Multipliers ukuba Instrument nganye ishicilelwe kwi Website yenkampani wazifaka kwiiseva yalo yorhwebo. ulwazi lomncedisi Trading uza koyisa xa kukho nakuphi na ukungangqinelani.
Non-Trading Operation i nokusebenza kwemali transfer kwaye (okanye) ngokubhala imali angabikho Akhawunti yoRhwebo a Client kwakunye nezinye Imisebenzi esingenanto ngqo kubulawa Trading Operations.
Indawo Vula esisixa iSixhobo wathenga (okanye ithengiswe), engabandakanywanga kwintengiso malungana (ukuthenga) iSixhobo efanayo isixa esilinganayo kunye (okanye) umthamo; isiphumo yokwenza inxalenye yokuqala worhwebo ngeenxa-uhambo (Imisebenzi Trading isikhundla lokuvula). Ngenxa nokuvula indawo isigulane ubutyala ukuba) ukuqhuba Operation Trading echasene lokuvala indawo ixabiso esifanayo; b) nokugcina Level eludinini ongekho ngaphantsi kwalowo elisekwe yiNkampani (ngokuba iiclamps usebenzisa le ngcamango).
order (ilindile Order, Nciphisa, level) i Order olunemiqathango umxhasi ukuba aqhube Trading Operation ukuba imiqathango, ebekwe yi-Client kwi Client i-Trading Terminal ziyafezekiswa; kokuba wayebonisa ukuba Umyalelo uya kubulawa ngexesha elingachazwanga kwixesha elizayo ngokungqinelana nenkqubo Orders kubulawa ocaciswe iziHlomelo kule Sivumelwano. Iintlobo Order abakhoyo baxhomekeke Trading Terminal ekhethwe Client.
Point (PIP) yenye unit Quote ebonakalayo lincinci leyo 0,0001 okanye 0,01 kuxhomekeke Instrument. Utshintsho a Quote ngenxa 1 (Nye) unit icandelo junior ithetha utshintsho ngenxa 1 (Nye) PIP.
Price Feed into Quotes series ethunyelwe Trading Terminal kubandakanywa zonke Quotes ezinikwe yiNkampani ukuya Abathengi phezu izicelo zabo onke amaxabiso eneneni olwenziwe Trading Operations.
Caphula lwemali (counter lwemali) i lwemali apho ixabiso kukho Instrument kamva. Xa lwemali lwemali Pair Counter limelwe zifana.
Quote lixabiso apho Operation Ukurhweba kunye Instrument iyakwenziwa.
Indlela lwesilinganiso (Uhlobo enze) yinkqubo yobugcisa kokufumana (eqinisekisa) yentengo yangoku kunye nokwenza umsebenzi ngumxhasi. Iindlela Quote efumanekayo bendawo ngokuxhomekeke kwiindidi Terminals Ukurhweba kunye Instruments benza kwaye elikhankanyiweyo iziHlomelo ahambelanayo kwesi siVumelwano.
waqaphela (fixed) Isiphumo Financial ibangelwa Financial kwi Uhambo Round. Isiphumo okugwenxa Financial kwi Uhambo Round kukulahlekelwa Client xa, zezilungileyo inzuzo.
Uhambo oluphelele yintlanganisela Imisebenzi ezimbini Ukurhweba echasene ne lomqulu (uvula onesikhundla wokuvala kwalo okwalandela): uthenga ne lokuthengisa esilandelayo okanye ukuthengisa kunye ukuthengwa elandelayo malunga indawo kunye iTikiti efanayo (ID).
Indawo short ethengisa of Instrument silindele ukuba ixabiso layo (inani) uya kuhla.
spot Instruments ezi wePurble lwemali kunye nesinyithi leyo inxaxheba yoRhwebo Imisebenzi ngokungqinelana nemigaqo imalike indawo i. Uluhlu lwe Spot Instruments esetyenziswa yiNkampani elichazwe Website yenkampani kwaye kwiiseva yalo yorhwebo. ulwazi lomncedisi Trading uza koyisa xa kukho nakuphi na ukungangqinelani.
Gcobisa ngumahluko phakathi Buza Price kunye Bid Price of an Instrument, kuboniswe iipete. Nokwanda usenokwahluka ngokuxhomekeke kwimiqathango yemarike.
Misa Loss na uhlobo wabelwa esinguMyalelo weNkundla Client xa kunokwenzeka ukuba uMyalelo eso kulindeleke ukuba sithengise ngexabiso (izinga) leyo lingaphantsi umyinge kwimarike yangoku okanye ukuthenga ngexabiso (izinga) ingaphezulu izinga market yangoku. Eyona njongo iphambili ye-Stop Orders ukuba aqhube Operation Ukurhweba ngexabiso lentengiso emva ixabiso le esinguMyalelo weNkundla ekufikelelwe kuso yi ixabiso i Instrument xa.
Misa-Out i wokuvala olusisinyanzelo ezikhundleni zabathengi ngamaxabiso lentengiso xa Level owamkelekileyo ilahleko sifikelelwe. Imithetho zokuvalwa olusisinyanzelo ezikhundleni zabathengi kunokwahluka ngokuxhomekeka kusetyenziswa Trading Terminal yaye zichazwe iziHlomelo Nemigaqo Trading Operations.
Misa-Out Level esisixa ilahleko kwi Indawo Vula (isikhundla) le Client va njengepesenti apho ke kwimeko yokufikelela kusungula wokuvala olusisinyanzelo le Position (isikhundla) yiNkampani ngexabiso Eyona ngaphandle isaziso kwangaphambili ye-Client. Amanqanaba Stop-Out for yesiphelo nganye Trading axeliwe kwi Website yenkampani kwaye ndahlala Server yeNkampani. Kwimeko naziphi na izinto ezingangqinelaniyo ulwazi oluchaziweyo kwi Umncedisi yeNkampani uya koyisa.
Tshintsha i roller kukho Indawo Vula i laBenzelwa ukuya kusuku olulandelayo. Imbasa kunye nemiqathango Tshintsha ezibunjwe yiNkampani ngohlobo ngalinye Trading Terminal.
Phawula utshintsho encinci yexabiso i Instrument. amaxabiso athile Amakhalane kuzo zonke Instruments ishicilelwe kwi Website yenkampani wazifaka kwiiseva yalo yorhwebo. ulwazi lomncedisi Trading uza koyisa xa kukho nakuphi na ukungangqinelani.
Kuhamba (ID) linani ezizodwa ukuba iNkampani uvumelekile ukuba abele kwisikhundla nasiphi na wavula okanye Order Engulindela of a Client kwi Trading Terminal.
Akhawunti yoRhwebo i Akhawunti ye Client eyodwa kwinkqubo zokugcina iingxelo kwiNkampani osetyenziswa nguye ngokugcina umkhondo zonke Imisebenzi Non-Ukurhweba iziphumo, iziphumo zorhwebo, Isikhundla Vula, EzinguMyalelo weNkundla kunye nezinye izenzo kunye izicelo a Client ukuba ikhankanywe esi siVumelwano kunye neencwadana zawo.
Usuku Trading lixesha span evela 21:00:00 ukuba 20:59:59 (IGMT), ngaphandle veki nangeeholide. Nokuvula nokuvala nexesha Day Trading kungenziwa isaqhubeka ukuba 1 ngehora phakathi ihlobo nobusika ixesha lotshintsho. Ulwazi lwamva malunga veki nangeeholide omelwa Website yenkampani wazifaka kwiiseva yalo yorhwebo. ulwazi lomncedisi Trading uza koyisa xa kukho nakuphi na ukungangqinelani.
Iiyure Trading lixesha span apho yoRhwebo Imisebenzi ukubulawa okanye Order zokubeka i Instrument kunokwenzeka. Trading lokuphumla ukuze Instrument nganye kuchaziwe kwi Website yenkampani wazifaka kwiiseva yalo yorhwebo. ulwazi lomncedisi Trading uza koyisa xa kukho nakuphi na ukungangqinelani. Ngexesha Iiyure Non-Ukurhweba Ukurhweba Imisebenzi kubulawa kunye Order nokubekwa (kokulungiswa) akunakwenzeka.
Trading Operation na uguqulelo phezu-the-counter operation kunye nezixhobo yemali eyenziwa phakathi Client kunye Company kwimo non-eyahanjiswayo, i.e. utyando kuthetha ukuthenga okanye nokuthengisa Instrument, apho imigaqo «kuthenga» okanye «nithengisa» kuthathwa imiqathango yobugcisa akukho ukudluliswa ubunini Instrument. Imisebenzi Trading ziqhutywa kwindawo yeNkampani.
Trading Operation Volume esisixa iSixhobo nto oluza kuthengiswa okanye wathenga amaqashiso, iiyunithi zemilinganiselo iSixhobo ehambelana okanye isixa lorhwebo ngohlobo lwemali Ukulinganisela (ngokuxhomekeke Trading terminal kusetyenziswa).
Trading Terminal zizixhobo zecomputer ezizodwa hardware, leyo eyenza i Client ukuba bayavumelana Inkampani nge uthungelwano yekhompyutha jikelele malunga amagama ezibalulekileyo kunye nemiqathango Ukurhweba kweMisebenzi wabulawa ngaphakathi sikhokelo lesi siVumelwano kwakunye ukuba ubhale imigaqo evunyiweyo kunye nemiqathango, Ukusetha irhoxisiwe Miyalelo. I Trading Terminal ivumela ukufumana inkcazelo yemali kwiimarike zemali jikelele, ukuthumela imiyalelo iNkampani kwaye ufumane iziqinisekiso kunye neengxelo ezivela iNkampani. Le Trading Terminalshall unike ukuchongwa yaMazwe (ungqinisiso yamaQela) ukuba imiyalezo exchange kwakunye iimfihlo kunye nemfezeko imiyalezo ngoncedo izixhobo eyakhelwe-ngaphakathi yokhuseleko lokufihla. I-software ne-hardware iiseti ezithile ziquka ulwazi kunye norhwebo platform Libertex kwakunye nezinye iinkqubo ekucetyiswa ukuba ukusetyenziswa yiNkampani ngenjongo ekwenzeni yesiVumelwano.
Asset engundoqo i-asethi leyo isiseko se-Instrument kwaye nozuzwe okanye ithengiswe xa eqhuba Operations Trading. Bha Asset angamelwa lwemali (lwemali Base), esitokisini, yezimbiwa, indices, bazisebenzise kwakunye nezinye izinto, izinto kunye neemeko ngokuvumelana noluhlu evunyiweyo yiNkampani.
kungaqatshelwanga (Ixabiso lencopho, Current) Isiphumo Financial(Incopho Inzuzo / Ilahleko) ibangelwa Financial ukuba Isikhundla Vula ngamaxabiso yangoku Instruments. Isiphumo zibi Isikhundla Vula ilahleko Ixabiso lencopho, lowo HIV Inzuzo Ixabiso lencopho.
Uhlobo ukurhoxiswa yenye yeendidi mali Ukurhoxiswa olunikezwa Client kwakhe yakhe Personal Akhawunti Management Portal.
Udliwano-ndlebe kunye neNtloko Product yeSebe - LIBERTEX